Waqtiga oo la badali doono | Somaliska
Sida ay la socdaan dadka ku nool Sweden, saacada dalka ayaa la badalaa 2 waqti ayadoo marna lagu daro 1 saac marna laga jaro. Habeenka Axada ugu dambeysa bisha Maarso ayaa 1 saac lagu daraa saacada Sweden, ayadoo saacada marka ay tahay 2:00pm is badalka la sameeyo oo laga dhigo 3:00pm. Saacada ayaa laga jaraa Habeenka Axada ugu dambeysa ee bisha Oktobar taasoo ku beegan 31, Oktoobar, 2010 ayadoo marka saacada ay tahay 3:00pm laga dhigi doono 2:00pm. Arintaan ayaa aad muhiim ugu ah in ay ogaadaan dhamaan dadka ku nool Sweden ayadoo tani saameen wayn ku yeelanaysa saacadaha shaqada, iskuulada , tareenada iyo dhamaan qaybaha nolosha. Hadaba ha iloobin in aad saacadaada ka jarto 1 saac, maalinta Axada ee bisha ku beegan tahay 31, October. Kombuyuutarada ayaa iskood isaga jari doona saacada.
Sida ay la socdaan dadka ku nool Sweden, saacada dalka ayaa la badalaa 2 waqti ayadoo marna lagu daro 1 saac marna laga jaro. Habeenka Axada ugu dambeysa bisha Maarso ayaa 1 saac lagu daraa saacada Sweden, ayadoo saacada marka ay tahay 2:00pm is badalka la sameeyo oo laga dhigo 3:00pm.
Saacada ayaa laga jaraa Habeenka Axada ugu dambeysa ee bisha Oktobar taasoo ku beegan 31, Oktoobar, 2010 ayadoo marka saacada ay tahay 3:00pm laga dhigi doono 2:00pm.
Arintaan ayaa aad muhiim ugu ah in ay ogaadaan dhamaan dadka ku nool Sweden ayadoo tani saameen wayn ku yeelanaysa saacadaha shaqada, iskuulada , tareenada iyo dhamaan qaybaha nolosha.
Hadaba ha iloobin in aad saacadaada ka jarto 1 saac, maalinta Axada ee bisha ku beegan tahay 31, October. Kombuyuutarada ayaa iskood isaga jari doona saacada.